परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
इसाई सेवामा चिरस्थायी आनन्द हामीले येशूलाई अझ राम्ररी चिन्ने तथ्यबाट बढ्छौं। तपाईं लाग्न सक्नुहुन्छ कि यो हामी पास्टरहरू र चर्च नेताहरूको रूपमा स्पष्ट छ। खैर, म चाहन्छु यो थियो। हाम्रो सेवकाई येशू ख्रीष्टसँग बढ्दै गएको सम्बन्धमा भरोसा गर्नुको सट्टा नियमित रूपमा गर्नु हाम्रो लागि एकदम सजिलो छ। वास्तवमा तपाईको सेवकाईले कुनै असर पार्दैन जबसम्म तपाई येशूसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गर्नुहुन्न।
फिलिप्पी :3,10:१० मा हामी पढ्छौं: म उहाँलाई र उनको पुनरुत्थानको शक्ति र उनको कष्टहरूको समुदायलाई चिन्न चाहन्छु, र यसैले उसको मृत्यु पनि त्यस्तै होस्। शब्द पहिचानले पुरुष र महिलाको बीचमा रहेको घनिष्ठ, परिचित सम्बन्धलाई संकेत गर्दछ। Prison फिलिप्पीहरूलाई जेलबाट चिठी लेख्दा पावल खुसी हुनुको एउटा कारण ख्रीष्टसितको घनिष्ठ र गहिरो सम्बन्ध थियो।
विगत दुई हप्तादेखि मैले तपाईसँग इसाई सेवामा दुई सब भन्दा बलियो आनन्द हत्यारहरु - वैधानिकता र गलत प्राथमिकताहरु बारे छलफल गरें। ख्रीष्टसँगको सम्बन्धले सेवामा तपाईंको आनन्दलाई पनि मार्नेछ। मलाई याद छ धेरै समय अगाडि एउटा केटा ओछ्यानबाट खसेको कथा सुनिरहेको थियो। उनकी आमा शयन कक्षमा गई र भनिन्: के भयो, टोमी? उसले भन्यो: मलाई लाग्छ म ओछ्यानमा पुगेको भन्दा धेरै बसिरहेको थिएँ।
हामीमध्ये धेरैलाई इसाई सेवकाईमा समस्या छ। हामी ईश्वरको परिवारमा आइपुग्छौं तर हामी सुरु भएको ठाउँमा धेरै टाढा रहन्छौं। हामी अगाडि बढ्दैनौं। हामी भगवानलाई गहिरो र व्यक्तिगत रूपमा चिन्नको लागि आध्यात्मिक तवरमा बढेका छैनौं। के तपाईं कर्तव्यमा आफ्नो आनन्द पुनः प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? ख्रीष्टसँगको तपाईंको सम्बन्धमा बढ्दै जानुहोस्।
ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध गाढा बनाउन तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ? इसाई सेवकाईमा कसैले ख्रीष्टलाई अझ राम्ररी चिन्न कसरी हुन्छ भन्ने कुराको कुनै रहस्य छैन। तिनीहरू सबैको जत्तिकै हुर्कन्छन्।
तपाईं भगवान संग समय खर्च। के तपाईं परमेश्वरसँग बढी समय बिताइरहनुभएको छ? जब हामी इसाई सेवामा व्यस्त हुन्छौं, हामी प्रायः आफ्नो समय परमेश्वरसामु रहन दिन्छौं। हामी परमेश्वरसँगको हाम्रो समयको लागि अत्यन्त ईर्ष्यालु हुनुपर्दछ। उहाँसँग पर्याप्त समय खर्च नगरी परमेश्वरको सेवा गर्नु बेकार हो। जति धेरै तपाईं ख्रीष्टसित समय बिताउनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईं चिन्नुहुन्छ - र तपाईंको सेवकाईमा त्यति नै रमाइलो हुनेछ।
परमेश्वरसँग निरन्तर कुरा गर्नुहोस्। यद्यपि तिनीहरू केवल परमेश्वरसँग समय बिताउँदैनन्। तिनीहरू परमेश्वरसँग निरन्तर कुराकानी गरेर घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्दछन्। यो कल्पनाशील शब्दहरूको गुलदस्ता पनि होइन। मेरो प्रार्थना धेरै आध्यात्मिक लाग्दैन, तर म हर समय परमेश्वरसँग बोल्छु। म एक फास्ट फूड रेस्टुरेन्टको गल्लीमा उभिन सक्छु र भन्छु: भगवान, म यो खाजा खाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। मलाई भोक लागेको छ! मुख्य कुरा यो हो: परमेश्वरसँग कुरा गरिरहनुहोस्। र आफ्नो प्रार्थना जीवन को विवरण मा पागल नहुनुहोस् - जस्तै कहिले, कहाँ र कहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने तपाईले अनुष्ठान वा नियमका लागि सम्बन्ध साटासाट गर्नुभयो। तपाईं यी अनुष्ठानहरूको आनन्द लिनुहुन्न। येशू ख्रीष्टसँग बढ्दो सम्बन्धले मात्र त्यसो गर्नेछ।
आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले भगवानमाथि भरोसा राख्नुहोस्। परमेश्वर हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्न सिकेको चाहनुहुन्छ। प्रायजसो यही कारणले गर्दा उनले समस्याहरूलाई हाम्रो जीवनमा घस्रन दिए। यी समस्याहरूको माध्यमबाट, उसले आफ्नो विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्न सक्छ - र यसले तपाईंमा भरोसा बढाउँदछ। र उहाँसँग तपाईंको सम्बन्ध प्रक्रियामा बढ्नेछ। केहि संघर्षहरू जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईं हालसालै पार गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले तपाईंलाई कसरी उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोसिस गर्नुहुन्छ? यी समस्याहरू परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको ढोका हुन सक्छन्।
फिलिप्पी Paul मा पावलले हामीलाई उनको पहिलो लक्ष्य के थियो बताउँछ। उसले स्वर्गीय इनामहरू, अरूबाट पुरस्कृत गर्ने पुरस्कारहरू, वा यहाँसम्म कि प्रमुख चर्चहरू वा व्यक्तिहरूलाई पनि ख्रीष्टमा उल्लेख गर्दैन। ऊ भन्छ: मेरो जीवनको पहिलो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भनेको ख्रीष्टलाई चिन्नु हो। उनले यो आफ्नो जीवनको अन्तमा भन्छन्। के उसले परमेश्वरलाई अझै चिनेन? अवश्य पनि उनी उहाँलाई चिन्थे। तर ऊ उसलाई अझ राम्ररी चिन्न चाहन्छ। भगवानको लागि उहाँको भोक कहिल्यै रोकेन। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ। मसीही सेवामा हाम्रो आनन्द यसमा निर्भर गर्दछ।